Ninkii CIA u waraystay Saddam Xuseen markii la qabtay - BBC Somali
Markii gacanta lagu dhigay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen 2003, waaxda sirdoonka Maraykan ee CIA waxay u baahatay khabiir haybtiisa xaqiijin kara oo su'aalo weydiin kara si xog looga helo. Qofkaas wuxuu ahaa John Nixon.
Nixon wuxuu darsayey Saddaam tan iyo markii uu CIA ku biiray 1998. Kaalintiisa ayaa ahayd inuu xog waafi ah ka uruuriyo hogaamiyeyaasha dunida, oo uu taxliiliyo waxa madaxdaas adkaynaya, wuxuuna uga warramay barnaamijka BBC ee BBC's Victoria Derbyshire programme.
Waxaa jiray warar la isla dhex marayey xilligaas oo ah in Saddaam uu isbeddel xagga jirka ah ku dhacay, laakin Nixon oo CIA ka tegey 2011 wuxuu yiri " shaki igama inuu isaga yahay markii aan arkay".
"Markii aan hadalka ku billaabay wuxuu ii eegay sidii aan muuqaalkiisa ku arkay bug kiisa ah oo miiska xafiiska muddo sanooyin ah ii saarnaa" ayuu yiri.
"Wuxuu ka mid ahaa dadka shaqsiyadoodu soo jiidashada leedahay ee aan la kulmay" ayuu yiri, wuxuuse intaa ku daray inuu mararka qaar isku beddelayey qabiix kibir badan oo dabeecad xun.